JABUUTI OO ITOOBIYA CODSIYO U SOO GUDBISAY – WAAYO? | SOMALISTATE.COM
JABUUTI OO ITOOBIYA CODSIYO U SOO GUDBISAY – WAAYO?
No comments ADDIS ABABA – Wasiirka arrimaha dibada ee Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa la kulmay ra’isulwasaare-ku-xigeenka Itoobiya – Demeqe Mokenon. Ergeyga Jabuuti ayaa dawlada Itoobiya ka dalbaday inay ka taageerto codsiyo saddex ah.
Dawlada Jabuuti ayaa Itoobiya ku boorisay inay taageerto laba jago oo ay isaga diyaarinayso inay ka qabato ururka Midowga Afrika. Jagooyinkan ayaa kala ah ku-xigeenka gudoomiyaha iyo gudoomiyaha arrimaha siyaasada ee ururka. Boosaskan ayaa doorasho loogu tartamayo dhawaan la qaban doona.
Jabuuti iyo Itoobiya ayaa leh cilaaqad aad u wanaagsan oo ah dhanka ganacsiga, gaadiidka iyo bulshada . Wadamadan ayaa dhaqaale ahaan isku tiirsan.
Codsiga 3-aad ee Jabuuti ayaa si toos ah uga yimid madaxwene Cumar Geele oo dhambaal u soo diray ra’isulwasaaraha Itoobiya. Geele ayaa Hailemaraim ka codsaday inuu ka soo qaybgalao xaflada furitaanka jidka tareenka ee isku-xidha labada dal oo la filayo usbuucyada fooda inagu soo haya.
Itoobiya ayaa soo dhaweysay codsiyada Jabuuti, balse waxa ay u sheegtay inay ka fiirsanayso dalabka loo soo gudbiye.